Intaba-mlilo enkulu kunazo zonke e-Iceland isizoqhuma | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Intaba-mlilo enkulu kunazo zonke e-Iceland isizoqhuma
Bekungeke kube yindaba ethokozisayo namhlanje, ukube bekungayinye intaba-mlilo eyodwa esizoqhuma, kodwa iqiniso ukuthi sikhuluma ngeBardarbunga, intaba-mlilo enkulu kunazo zonke e-Iceland. Ngokuphakama kwamamitha ayi-2009 ngaphezu kogu lolwandle, kwaqhuma okokugcina ngo-Agasti 2014. Izimpawu zamuva zokuzamazama komhlaba zimemezela ukuthi kungenzeka ukuqhuma okuseduze kwenzeke.
Kuqashwe izazi zokwakheka komhlaba njalo ngemuva kwenani elikhulu lomsebenzi wokuzamazama komhlaba, kukhombisa ukuthi ingcindezi engaphakathi kwe-caldera iyanda. Ubukhulu becdera laseBardarbunga linamakhilomitha-skwele angama-70, ububanzi bamakhilomitha ayi-10, nokujula kwamamitha ayi-700. Ngenxa yokuphakama nendawo okukhona, intaba-mlilo imbozwe yiqhwa nentaba-mlilo efihlwe ngaphansi kwayo.
Isazi se-Geophysicist uPáll Einarsson, wase-University of Iceland, uphawule wathi isizathu sokuthi kube nokuzamazama komhlaba kule ndawo kungenxa yokuthi intaba-mlilo iyagcwala. Okusho ukuthi, ingcindezi yemagma egumbini iyanda. Le nkomba, ngokusho kuka-Einarsson, iyisibonakaliso sokuthi intaba-mlilo izoqhuma, esikhathini esifushane, futhi kungenzeka eminyakeni embalwa ezayo. Ukuzamazama komhlaba kukodwa akubanga ukuqhuma, kepha kuyizinkomba zenqubo.
Izimpawu zaqala ngoFebhuwari 2015, okuyilapho nokuqhuma kwayo kokugcina nakho kuphelile. Njengamanje, lokho kuqhuma kokugcina ngo-2014 nakho kwandulelwa ukuzamazama komhlaba, okwaqala ngo-2007. Okunye okuqinisekile ngukuthi iziyaluyalu zomoya ezingazidala zizoba nezindleko ezinkulu. Ukuyiqonda, bheka nje intaba-mlilo yase-Iceland i-Eyjafjallajökull, eyathi ngo-2010 yaphonsa izinkulungwane zamathani omlotha wamaminerali emoyeni, futhi abagibeli abayizigidi eziyi-10 abayithathanga indiza. Sekukonke lawo madethi, kulinganiselwa ukuthi kwezomnotho waseYurophu izindleko zaziyizigidigidi ezingama-4.900 zamadola.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Intaba-mlilo enkulu kunazo zonke e-Iceland isizoqhuma